စိန်ရတုခန်းမမှ လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ~ Myaylatt Daily.
5:49 PM သတင်း No comments
Mon, 2015-02-02 06:29
No. 642 Monday, February 2, 2015.
လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ))
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စိန်ရတု ခန်းမကျယ်အတွင်း လေးပွင့်ဆိုင် နေရာချထားသည့် စားပွဲခုံများ တွင် အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ၊ ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် (NNER) မှ ပညာရှင်များ နံနက် ကိုးနာရီ၌ ရောက်ရှိနေကြသည်။
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၏ အဓိကဇာတ် ဆောင်ဖြစ်သော သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၁၅ ဦးသတ်မှတ်ချိန်ထက် ၁၅ မိနစ်ကျော်နောက်ကျပြီး အစည်းအဝေးခန်းသို့ ရောက်လာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကို စတင်သည်။
လေးပွင့်ဆိုင် ကိုယ်စားလှယ် ပေါင်း ၇၀ ခန့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး စိန်ရတုခန်းမကျယ်အတွင်း အပြန်အလှန် ပြေဆိုဆွေးနွေးမှုကို သ တင်းမီဒီယာနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်း များမှ လူဦးရေ ၂၀၀ ကျော် လွတ် လွတ်လပ်လပ်ပွင့်လင်း မြင်သာ မှုရှိစွာ နားထောင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို သမ္မတရုံးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၏ အဖွင့်စကားဖြင့် စတင်လိုက်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်စန်းရီ၊ လွှတ် တော်ဘက်မှ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီ ဥက္က ဋ္ဌဦးသိန်းဇော်၊ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဇေယျာလွင်နှင့် NNER မှ ဒေါက်တာသိန်းလွင်တို့ ကအဖွင့်စကားများပြောသည်။
ထို့နောက် လက်ဖက်ရည် သောက်နားချိန်အပြီး နံနက် ၁၀ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် သပိတ် မှောက် ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင် မဖြိုးဖြိုးအောင်က ဆွေး နွေးပွဲမူဘောင် ကိုးချက်ကို တင်ပြ သည်။
သပိတ်မှောက်ကျောင်း သားများတောင်းဆိုသော အချက် ၁၁ချက်ဆွေးနွေးရန် ရောက်ရှိလာ သော အစိုးရ၀န်ကြီးများ၊ လွှတ် တော်ကိုယ် စားလှယ်များအတွက် ထင်မှတ်မထားသော တင်ပြချက်က ဆွေးနွေးပွဲကို အပြောင်းအ လဲဖြစ်စေခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး နွေးပွဲပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံ ရှိထားသူ ဦးအောင်မင်းက သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများ၏ ဆွေး နွေးပွဲမူဘောင်တင်ပြချက်အပေါ် ရုတ်တရက် မှင်တက်သွားသော် လည်း လက်ဖက်ရည်သောက် ချိန်သတ်မှတ်ကြောင်း ထပ်မံကြေ ညာပြီး အသွင်ပြောင်းလဲသွား သော ဆွေးနွေးပွဲကို ထိန်းသိမ်း ခဲ့သည်။
အစိုးရ၀န်ကြီးများနှင့် လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ ဆွေးနွေးပွဲခန်းမအောက်ထပ်ရှိ သီး ခြား စည်းဝေးခန်းမများတွင် ကျောင်းသားများ ထပ်မံတင်ပြ လာသည့် ဆွေးနွေးပွဲမူဘောင် ကိုးချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ခေါင်း ချင်းဆိုင်ကြသည်။
ရုတ်ခြည်းရပ်တန့်သွား သော ဆွေးနွေးပွဲခန်းမအတွင်း ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ နှင့် NNER မှ ပညာရှင်များ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး မကြာမီတွင် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းဗဟိုဌာန(MPC) မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်များ၊ NNER မှ ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် စကားပြောသည်ကို တွေ့ရသည်။
တစ်နာရီကျော်ကြာရပ်နား ပြီးနောက် ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း နှင့်အတူ အစိုးရ၏ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဦးဆောင် နေသူ ၀န်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်း ဆွေးနွေးပွဲခန်းမထဲသို့ ရောက်ရှိ လာသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ခေါ်ခင်စန်းရီမှာ နံနက်ပိုင်းတွင် အဖွင့်စကားပြောဆိုပြီး ကတည်းက ဆွေးနွေးပွဲမှ ပျောက် ကွယ်သွားခဲ့သည်။
နေ့လယ် ၁၂ နာရီတွင် ဆွေး နွေးပွဲ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာ ကာ ဆွေးနွေးပွဲမူဘောင်၏ တစ်ချက်ချင်းစီကို ဦးအောင်မင်းက စတင်ဆွေးနွေးပြီး ပထမသုံးချက် ကို မူရင်းအတိုင်း လေးပွင့်ဆိုင် သဘောတူညီကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် အပြန်အ လှန် ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုများနှင့် အရှိန်မြင့်လာစေသောအချက်မှာ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းထားသော ကျောင်းသား၊ ဆရာသမဂ္ဂများ၏ တရားဝင်မှုကို လေးစားစွာ အသိ အမှတ်ပြုရမည်ဟု ကျောင်းသား များတင်ပြထားသော အချက်ဖြစ် သည်။
NNER မှ ပညာရှင်များဖြစ် သော ဒေါက်တာ တင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာတင်လှိုင် တို့က ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၏ အစဉ် အလာနှင့် အခန်းကဏ္ဍတို့ကို ပါ ၀င်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဦးတင်နိုင်သိန်း နှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် များအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများ အရှိန်ကောင်းခဲ့သည်။
သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမား ခဲ့သော ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ နှင့် ပတ်သက်၍ သမဂ္ဂဟူသော အသုံးအနှုန်းကို မကြောက်ရွံ့ကြ ရန်နှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေး သော အစိုးရဖြစ်လာစေရန် NEERမှ အထက်ပါပညာရှင်နှစ်ဦးက ပြောသည်။
ဆွေးနွေးနေစဉ်အတွင်း ၀န် ကြီး ဦးအောင်မင်းထံ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက စာရွက်တိုများ လာ ရောက်ပေးပို့မှုကို တွေ့ရသည်။ သမဂ္ဂအပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်း များကို ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုသည်ဆို သော အဆိုပြုချက်ကို လွှတ် တော်သို့ တင်သွင်းမည်ဟု ဦး အောင်မင်းက သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားများအား ပြောသည်။
သို့သော် လက်ရှိဖွဲ့စည်း ထားသော ကျောင်းသား၊ ဆရာ သမဂ္ဂများ၏ တရားဝင်မှုကို လေး စားစွာ အသိအမှတ်ပြုရမည်ဟူ သောအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမှာ သဘောတူ ညီချက်မရရှိဘဲ ခေတ္တနားကာ နေ့ လယ် ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် နေ့လယ်စာ သုံးဆောင်ရန် နားခဲ့ သည်။
ထမင်းစားနားချိန်မှာ သုံးနာ ရီခန့်ကြာမြင့်ပြီး နားနေချိန်တွင် ကိုယ်စားလှယ်များ သီးခြားအ စည်းအဝေးခန်း၌ တွေ့ဆုံဆွေး နွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြသည်။
လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ ညနေ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ပြန် လည်စတင်ခဲ့ကာ ကျောင်းသား များတင်ပြထားသော ဆွေးနွေးပွဲ မူဘောင်များနှင့် ပတ်သက်၍ အ ချက်လေးချက်ကို ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပြီး သဘောတူညီမှုရယူ နိုင်ခဲ့သည်။
ကျောင်းသားများ တောင်း ဆိုထားသော အချက် ၁၁ ချက် ကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာမည့် တွေ့ဆုံပွဲဟု ထင်မှတ်ထားသော် လည်း ဆွေးနွေးပွဲမူဘောင်များ ကို အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးရင် ည ၇ နာရီခန့်အချိန်တွင် ဆွေးနွေးပွဲ ကတိုက်ကရိုက်ပြီးဆုံးသွား ခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲမူဘောင်တွင် နံပါတ် (၇) အချက်ဖြစ်သော ‘‘ဒီမို ကရေစီပညာရေးသပိတ်တွင် ပါ ၀င်သူမည်သူကိုမှ သပိတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အရေးယူခြင်းမပြု ရ’’ဟူသော အချက်ကို အစိုးရ ဘက်မှ သဘောမတူညီခဲ့သကဲ့သို့ ကျောင်းသား၊ ဆရာသမဂ္ဂများ အသိအမှတ်ပြုရေးအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှု များရှိခဲ့သည်။
ပထမအကြိမ် ပညာရေးဆိုင်ရာလေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲသည် အစိုးရ၀န်ကြီး နှစ်ဦးနှင့် ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်များ အဓိက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ဘက်မှ ဦးသိန်းဇော်နှင့် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးတို့က လွှတ်တော်ရေးရာနှင့် စကားလုံး အသုံးအနှုန်းများကို ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့သည်။
ယခုဆွေးနွေးပွဲတွင် သ ဘောတူညီရန် ကျန်ရှိနေသေးသော အချက် နှစ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း မပြုရသေးသော အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေး တောင်းဆိုချက် ၁၁ ချက်ဆက် လက်ဆွေးနွေးရန် ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် နေပြည် တော်အစည်းအဝေး၌ ဆက် လက်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။